तपाईं यो खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठमा हुनु पर्छ Martech Zone
तपाईं यो खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठमा हुनुपर्दछ
मंगलवार, मार्च 3, 2009 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
आज रात मलाई टेकमेकर्सको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्न खुशी लाग्यो, रैनमेकरहरूको पहिलो उद्योग विशेष शाखा। Indian बर्ष सम्म इंडियानापोलिसमा बसोबास गर्दै र बिस्तारै टेक्नोलोजी क्षेत्रको गोलो बनाउँदै, यस आकारलाई देख्न पाउँदा ठूलो लाग्यो।
मैले आज राति स्किट गरें र सोचें कि यसले निकै राम्रो काम गर्यो। मैले विचार साझा गरेपछि डग थिस मसँग शुक्रबार बस्नुभयो र हामी बाहिर निस्क्यौं लिपि सँगै स्किट एक्सचेन्ज मुद्दा समाधान गर्न मद्दतको लागि आईटी स्रोतहरू खोज्ने एक काल्पनिक कम्पनीको बारेमा थियो। हामीले नाटक गर्यौं कि कम्पनीले सहयोग खोज्यो - पहिले फेसबुकमा, त्यसपछि लिंक्डइन, त्यसपछि ट्वीटर र अन्ततः कर्पोरेट वेब साइटमा।
यी मध्ये कुनै एक मा प्रत्येक भ्रमण प्रकोपको साथ भेटिन्छ। यहाँ सम्म कि कर्पोरेट वेब साइट, एक रेफरल, मार्केटिंग स्पोकनले भरिएको थियो - आईटी एक्सचेन्ज परामर्शको समर्थन हुने सामग्री वा कम्पनीमा सम्पर्कको कुनै प्रभावकारी साधन नभएको। प्रत्येक प्रतिक्रियाको साथ सहयोगको साथ अत्यधिक प्रतिक्रिया गरियो लोरेन बल र डग थेइस लाइफलाइन डाटा केन्द्रहरू.
स्किटको निष्कर्ष केवल मलाई प्रासंगिक नतिजाहरूमा कुरा गरिरहेको थियो जुन गुगलले आपूर्ति गर्दछ, आगन्तुकको उद्देश्य, साथ साथै प्रयोगको प्रतिशत। व्यक्ति जो फेसबुक मा यात्रा को लागी खरीद को उद्देश्य छैन, तर कुनै को लागी उत्पादन वा सेवा को लागी खोज गरीरहेको छ। Of ०% व्यक्तिहरू अब उनीहरूको दैनिक इन्टरनेट गतिविधिहरूमा खोजी सामेल गर्दछन् - फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इत्यादि। संयुक्त 90% भन्दा कम छन्।
तथ्य यो हो कि कम्पनीहरू जसले प्रभावी रूपमा इनबाउन्ड लिड्स प्राप्त गर्न चाहन्छन् त्यसले केही प्रकारको खोज इञ्जिन मार्केटि strategy रणनीति (वा बहु) प्रयोग गर्नुपर्दछ। SEO को लागी ब्लगिंग नेतृत्व प्राप्त गर्न को लागी एक अविश्वसनीय शक्तिशाली उपकरण हो।
ब्लगहरू जुन राम्रोसँग खोज ईन्जिन अनुकूलित छन्। चलिरहेको छ कि महान सामग्री संग असीमित पहुँच - जब सम्म तपाईं महान सामग्री लेख्नु हुन्छ, तपाईं पाउनुहुनेछ।
वेबसाइटहरू जुन राम्रोसँग खोज ईन्जिन अनुकूलित छन्। साइटको आकार र कुञ्जी शब्द अप्टिमाइजको आकारमा सीमित, एसईओ वेबसाइट प्राय: हराएको एक पटक घटना हो।
अनुकूलित ल्यान्डिंग पृष्ठ रणनीतिहरूको साथ साइटहरू। यो एक धेरै प्रभावी रणनीति हो तर विकास र SEO अभ्यासमा महँगो।
प्रति क्लिक भुक्तान गर्नुहोस्। यो पनि प्रभावी छ, तर तपाईंले खोज्नुभएको वास्तविक कुञ्जी शब्दहरूमा सीमित छ र खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ (SERP) मा%% देखि १ to% क्लिकहरू।
अन्तमा, म विश्वास गर्दछु कि ब्लगिging सामग्रीको उत्पादन गर्न कम्पनीको क्षमता दिएर एक महान रणनीति हो। साथै, ब्लगसँग आरएसएसको थप लाभ छ, तपाईंलाई ती अन्य प्रविधिहरूमा - फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर (सँग प्रकाशित गर्न अनुमति दिदै Twitterfeed), र वेबसाइटमा समग्रता।
तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरूको लागि गुगल खोजी गर्नुहोस् (र स्थान लागू भने)। के तपाईं ती परिणामहरूमा देखा पर्नुहुन्छ? तपाईंले गर्नु पर्छ! तपाईं यो खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठमा हुनुपर्दछ.
टैग: एकत्रीकरणब्लगिंगएसईओ को लागी ब्लगिंगकर्पोरेट ब्लगिल्यान्डिङ पृष्ठहरूप्रति क्लिक भुक्तानी गर्नुहोस्गरीब एसईओखोजी ईन्जिन परिणामहरूएसईओtwitterfeed
यातायात सापेक्ष छ, मसँग पर्याप्त छ
गुगल खोजी कन्सोलको साथ आफ्नो सामग्री रणनीति जाँच गर्नुहोस्
मार्स 4, 2009 मा 9: 30 एएम
मलाई यस रमाईलो स्किटमा समावेश गर्नु भएकोमा धन्यवाद जसले महत्वपूर्ण बुँदालाई चित्रण गर्दछ। यदि तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरू (सम्भावित खरीददारहरू) तपाइँले फेला पार्न सक्नुहुन्न जब तिनीहरू किन्न तयार छन्, तपाइँसँग तिनीहरूको व्यवसायमा कुनै मौका छैन।
Tnomeralc डिजाइन खेलौना
मार्क्स 4, 2009 मा 8: 59 PM
मलाई यो पोस्ट मनपर्दछ, विशेष गरी अन्तिम लिंक! त्यो कीफ्रेसको लागि लाखौं पृष्ठहरू मध्ये, तपाईंको नम्बर १ आश्चर्यजनक!